China WP-WDG System – Faka isicelo ku-Agrochemical Field ifektri abakhiqizi | Qiangdi
Okokuqala, okuphakelayo kwempahla eluhlaza okwavela ku-feeder - ukudluliselwa kwento kuya kumamitha amathathu okuqala3Isihlanganisi se-premixing, futhi umqoqi wothuli uzoqoqa uthuli ngesikhathi senqubo yokudla, bese izinto ezixubekile zingena ku-QDF-600 jet mill yokugaya, usayizi wezinhlayiyana zokukhipha ungalungiswa ngokulungisa ijubane elihlukile lokujikeleza kwesondo lokwahlukanisa,. Ngemuva kokugaya, impahla izodlulisela kwisiphepho kanye nomqoqi wothuli ngaphezulu kwe-4m yokuqala3 mixer ngamandla we-centripetal we-fan fan, bese udlulisela ku-4m wesibili3 mixer yokuxuba ngaphambi kwephakeji noma ukudlulisela kusistimu ye-WDG.
Uhlelo lwe-WP / WDG - Faka isicelo ku-Agrochemical Flow Scheme
Uhlelo lwe-WP luyinhlanganisela ephelele yobuchwepheshe bokugaya i-jet, ubuchwepheshe bokuxuba kanye nobuchwepheshe bokulawula okuhlakaniphile. okuwumkhiqizo owanelisayo wezibulala-zinambuzane ukuxuba nokuxuba okuningi, Okwamanje, ihlangabezana nesicelo semvelo sokuthi kungabikho uthuli phakathi nenqubo yonke.
I-WDG (i-granule yamanzi ehlakazekayo) eyaziwa nangokuthi i-wettable powder eyomile yokumisa i-ejenti noma uhlobo lokusanhlamvu, impahla eluhlaza ye-powder wettable (WP) eyenziwe yi-granulation kanye emanzini, ingahlakazeka ngokushesha futhi ihlakazeke, ifomu lokulungiselela eliyimbudumbudu eliphakeme limisiwe uhlelo lokusabalalisa oluqinile.
I-Granulation ingumongo wayo yonke inqubo. I-Granulator iyisihluthulelo sokuqinisekisa ukuthi izinambuzane zokubulala izinambuzane kanye nenqubo yokumisa iyacatshangelwa, okususelwa kuzici zemithi yokubulala izinambuzane, idatha yokuhlola kanye nezibonelo zohlelo lokusebenza lobunjiniyela, ukukhetha ukushintshanisa i-extrusion granulator noma i-twin screw extruder granulator. (Faka uhlelo lwamanzi okupholisa ku-drive shaft isigaba), Noma isikulufa se-granulator (Faka isistimu yamanzi yokupholisa esigabeni segumbi le-Granulation), Noma i-granulator yombhede ophuzisiwe (Inqubo ye-Fluidized bed granulation kanye nenqubo ye-extrusion granulation yehlukile) .Imfuneko yokuqukethwe umswakama we-granulation imayelana no-8-18%. kuzici zomkhiqizo nezinqubo zokukhiqiza, ukunquma ukwakheka kwenqubo ikakhulu kuqukethe: ukuxolela, i-granulation, ukomisa, ukuhlolwa, ukupakisha, amasistimu omoya ashisayo, uhlelo lokususa uthuli.
Ishadi Lokugeleza Lombhede we-Fluidized-bed Jet Mill WP Line / WDG Line
Okokuqala, impahla eluhlaza izothuthelwa ku-1000L Buffer, bese itto ZGH-1000 mpo umshini wokuxuba yi-Vacuum ZKS-6 yokuxuba okumanzi bese uyisa ku-XL-450 extrude granulator (3pcs) nge-500L distributor ye-granule emanzi, bese iya ku-QZL- 1300 pelletor, nakuZQG-7.5 X 0.9 Vibrate Fluid-bed Dryer strip granules bese kuthi i-ZS-1800 centrifugal vibration sieve yesisefe ukuthola usayizi odingekayo.
Uketshezi Lombhede Omile Wokuqothula
Isixwa uketshezi lombhede wokomisa impuphu yamakhemikhali
Vibration fluid umbhede ubuchwepheshe obusha obenziwe ngesisekelo sombhede we-static fluid. Ukudlidliza kwemishini kufakwa embhedeni oketshezi. Izinhlayiya ezimanzi zingena ekusakazweni komoya futhi zakhe umbhede oketshezi. Okuqukethwe kukhishwa ngenxa yamandla ajabulisayo. Ukudlidlizela kwepuleti elisabalalisa umoya kukhuthaza ukufafaza kwezinhlayiya ezibonakalayo nokuhamba kwento embhedeni oketshezi. Okuqukethwe oketshezi kuthinta umoya oshisayo futhi ngasikhathi sinye kuthwala ukushisa nokudlulisa okukhulu. Umkhiqizo owomisiwe ukhishwa echwebeni lokukhipha.
1. Isebenzisa ubuchwepheshe be-vibrofluidization obuthuthukile, umonakalo wento eyomisiwe yezinhlayiyana ezibonakalayo incane.
2. Ukunyakaza okuqinile, ukuzivumelanisa nezimo okuhle.
3. Ukudlidlizela kubangela uketshezi, ukoma komoya okwehliswayo, futhi izinhlayiya ezimbalwa ziyafakwa.
4. Isikhathi sokuhlala sezinto ezibonakalayo asihambelani, ikhwalithi yomkhiqizo iyunifomu.
5. Isetshenziselwa ukomisa okokushisa okubucayi ngesikhathi esifushane, njengamanzi angaphezulu
ukomiswa kwe-CUSO4 · 5H2O kuqukethe amanzi e-crystal, MgSO4 · 7H2O.
Ingasetshenziswa kwinqubo eyomile noma yokupholisa, esebenza ezinhlayiyeni ezinamandla noma izinhlayiya futhi ukugeleza okungekho lula kwemikhiqizo engajwayelekile, noma ngoba ukwenza izinhlayiya zingadingi kakhulu futhi zigcine isivinini semikhiqizo ephelele futhi kulula ukuyibopha, ezwela ekumeni kwethempelesha futhi iqukethe izinto ezisetshenziswayo gesso umkhiqizo ukususwa kwamanzi ebusweni kusuka.
Imodeli Indawo yombhede ene-fluidized
(M2) Ukushisa komoya okungenayo
(oC) Izinga lokushisa lomoya
(oC) Umthamo wamanzi wokuhwamuka
I-ZLG3 × 0.30 0.9 70-140 40-70 20-35 ZDS31-6 0.8 × 2
I-ZLG4.5 × 0.30 1.35 70-140 40-70 35-50 ZDS31-6 0.8 × 2
I-ZLG4.5 × 0.45 2.025 70-140 40-70 50-70 ZDS32-6 1.1 × 2
I-ZLG4.5 × 0.60 2.7 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1 × 2
I-ZLG6 × 0.45 2.7 70-140 40-70 80-100 I-ZDS41-6 1.5 × 2
I-ZLG6 × 0.60 3.6 70-140 40-70 100-130 I-ZDS41-6 1.5 × 2
I-ZLG6 × 0.75 4.5 70-140 40-70 120-140 I-ZDS42-6 2.2 × 2
I-ZLG6 × 0.9 5.4 70-140 40-70 140-170 I-ZDS42-6 2.2 × 2
I-ZLG7.5 × 0.60 4.5 70-140 40-70 130-150 I-ZDS42-6 2.2 × 2
I-ZLG7.5 × 0.75 5.625 70-140 40-70 150-180 I-ZDS51-6 I-3.0 × 2
I-ZLG7.5 × 0.9 6.75 70-140 40-70 160-210 I-ZDS51-6 I-3.0 × 2
I-ZLG7.5 × 1.2 9 70-140 40-70 200-260 I-ZDS51-6 I-3.0 × 2
I-XL Rotary ne-Extrude Granulator
Lo mshini usebenzisa i-blade eyodwa yokugaya ejikelezayo ukuze ugaye izinto ezimanzi kufomu lekholomu elime ngo-stainless steel cylinder isilinda esinikezwa i-pelletize kwinqubo elandelayo.Umshini ungathola usayizi ohlukile we-granule ngokushintsha isisefo sensimbi engagqwali.
Ingacubungula izinto ezimanzi futhi ithole usayizi ohlukile ngokuya ngezinto nezidingo.
Amandla ezimoto adluliswa unxantathu webhande-lesondo ebhokisini lamagiya kumphathi, futhi asabalalisa amandla ngezingxenye zokudlulisela ebhokisini lamagiya. Faka okokusetshenziswa ekuphakeleni i-hopper, uyicindezele kusuka phezulu.
Ngemuva kokuxubana, okokusebenza kugcwele ku-chute yokudla futhi kuphoqelelwe ukuphuma kwangaphandle ngensingo ekhethekile. Lapho okokusebenza kuminyene kugebe eliphakathi kwensimbi ne-mesh yesikrini, ummese wokusika uzowusika ube ngosayizi wokuhlanganisa.
Ouput 150-250kg / ihora (flake shape), 50-100kg / ihora (granule ukuma)
Usayizi Granule 0.5-2mm
Ingcindezi enkulu I-294Kn (30T)
Side uphawu ingcindezi Usayizi
Ukondla imoto 2.2Kw
I-Granulating Motor 2.2Kw
Icindezela imoto 7.5Kw
Yondla isivinini sesikulufa 6-33 eguquguqukayo
Icindezela isivinini se Wheel 4-25 eguquguqukayo
Isici sokucindezela isondo 240X100mm
Isisindo (cishe) 2000Kg
Ubukhulu beyunithi enkulu 1600X1000X2300mm
Lawula ubukhulu bekhabethe 600X400X1300mm
Umshini ulungele imboni yezemithi, imboni yokudla, imboni yeziphuzo eziqinile njalonjalo, Ingenza okunyakazisiwe kwempahla eluhlaza kuvuthele i-qanule edingekayo. Ikakhulukazi ilungele izinto zokusetshenziswa ezinamathelayo.
Zonke izingxenye ezixhunywe ngempahla eluhlaza kulo mshini zenziwe ngensimbi engagqwali. Ukubukeka kwayo kungubuhle. Ukukhishwa kwayo kuyazenzakalela.Ngakho-ke kungagwema izimo ezilimele ezibangelwa ibhukwana. Iyakwazi ukwenziwa ekukhiqizeni ulayini futhi.
Amapharamitha amakhulu wezobuchwepheshe
Usayizi wokugaya ummese (mm) 300 400
Ububanzi granule (mm) Φ2 ~ 2.2 (Kungaba ngokuya ngezidingo zamakhasimende) .21.2 ~ 3 (Kungaba ngokuya ngezidingo zamakhasimende)
Ama-dimesion esewonke (mm) 700 × 540 × 1300 880 × 640 × 1300
Amandla ezimoto (kW) 3 4
Isisindo (kg) 350 400
Amandla wokukhiqiza (kg / h) 100 ~ 200 140 ~ 400
Isihlanganisi Esigcwele seJustless High
Isihlanganisi sohlobo lwe-LGH simile sakhiwa ngamaphini okuthumela phansi nezigwedlo ezigaya ngesivinini esikhulu, Izigwedlo ezingezansi ziyaqhubeka nokuthumela izinto phezulu ngasodongeni lwesiqukathi.
Isivinini sokugwedla izigwedlo ziqhekeza okokusebenza ngokuphelele kwenza umjikelezo wezinto ufane ne-vortex, ukuqedela ukuxuba okufanayo ngesikhathi esifushane.
Umshini wokuxuba wejubane we-LGH wuhlobo olusha kakhulu lokuxuba ukusebenza kahle kwefektri yethu, okuqoqe inqubo esezingeni eliphakeme yasekhaya naphesheya kwezilwandle. Izici eziyinhloko zinjengokulandelayo:
Izigwedlo zangaphansi zempahla ngokuqhubekayo zithumela okokusebenza phezulu ngamandla we-centrifugal. Futhi into ephezulu iyehlela ezansi enkabeni, ukwenza umjikelezo wezinto ezibonakalayo njenge-vortex.
Izigwedlo ze-2.High-speed ezichotshozayo ziqhekeza yonke impahla eningi ethunyelwa ngamagwedlo angezansi.
I-3.Izinto zingaxubana ngendlela efanayo ngesikhathi esifushane ngenxa yamagwedlo amabili aguqula isivinini esikhulu. Ijubane lokuxubana nokufana yilona elihamba phambili kuzo zonke izinhlobo zomshini wokuxuba emakethe yasekhaya. Ukufana ukuxubana okungu-100%.
4.Qala i-valve ekhiphayo, isivinini sokukhulula sishesha kakhulu, futhi umshini kulula ukuwuhlanza.
Izingxenye zokuxhumana zomshini zenziwe ngensimbi engagqwali, ngesikhathi senqubo yokuxuba, okokusebenza ngeke kuvuselele, kuguqulwe isimo futhi kulahleke.
Umshini wesudi wezinto ezahlukahlukene ezomile nezimanzi ezilinganisiwe ukuxuba, ikakhulukazi amasudi wokuxuba i-chicken essence, umuthi oncibilikisiwe, isiphuzo esincibilikisiwe njalonjalo.
Isikrini se-ZS RIAL vibro
okubizwa nangokuthi i-rotary vibro sifter, isihlungi esidlidlizelayo.Ingahlunga uketshezi njengamanzi angcolile kanye nowoyela wokumosha njll, isuse ukungcola kokuqukethwe, okufana nobisi oluyimpuphu, ilayisi, ummbila njll Hlanganisa / hlunga impuphu exubile ibe ngosayizi ohlukile imfuneko.
Umshini wokujikeleza wamalahle / wamalahle we-ultrasonic vibrating screen sifter machine wamukelwe ngamasu asezingeni eliphakeme imishini yokuhlola eyindida. Iqukethe umkhiqizi we-ultrasonic nesikrini sokudlidliza. Kuyindlela ebalulekile ekusebenzeni kahle kokuhlola. Lo mshini we-sieving usebenzisa isilawuli se-ultrasonic esithuthukisiwe esihlakaniphile futhi uxazulule izinkinga eziningi ezibangelwa imvamisa eyodwa, uqaphela ngempela inhlanganisela efanelekile ye-ultrasonic function kanye ne-vibration sieve.
Imisebenzi eminingi ngokulandelayo:
Uhlobo olunezendlalelo eziningi lungahlola futhi luhlukanise amaqembu amahlanu ezinhlayiya ezihlukene ngasikhathi sinye. Ifanele izinto ezomile.
Ingxube yento eqinile neyoketshezi ingahlukaniswa ngempumelelo ngohlobo olulodwa noma lwesendlalelo esiningi lube yizinto ezihlukile zebanga.
3. Susa ukungcola
Iyunithi lingahlukanisa ngokushesha izinhlayiya ezimbalwa zokweqisa noma ezehlisa ubuningi bezinto zokwakha
Isistimu yokuhlanza sisebenzisa idivaysi ye-ultrasonice ye-Rotary amalahle / amalahle e-ultrasonic vibrating screen sifter machine
I-Kneader iyithuluzi elikahle lokuxova, uhlanganise okokunamathisela impahla nge-viscosity ephezulu nepulasitiki ye-elasto. Isethi ngayinye ye-kneader inezingcezu ezimbili zamasiga e-sigma ngaphakathi kwekamelo lokuxuba lohlobo w. Isetshenziswa kakhulu ukuxova, ukuxuba, ukuchoboza, ukusabalalisa nokupholisha kabusha i-viscosity unamathisele noma izinto ze-elastoplastic, ezingenakucutshungulwa ngabaxube be-powder abajwayelekile kanye nabahlanganisi bamanzi. Ingasetshenziswa ezimbonini ezidingekayo zokuxovwa kwabantu abaningi njenge-agrichemical, chemical, rubber, foodstuff kanye nokulungiswa kwemithi. Umphumela ungcono kune-mixer. I-Kneader iyimishini ekhethekile yokuxuba enezinhlamvu ezimbili. Ukushesha kuvame ukuzungeza ngejubane lama-42 revolutions ngomzuzu, kuhamba kancane ngejubane lama-28 revolutions ngomzuzu. Isivinini esihlukile senza izinto zokuxuba zenze i-homogenate ngokushesha.
- Umklamo wesitshalo
- Inqubo ukuqapha, ukulawula kanye ezishintshayo
- Ukuthuthukiswa kweSoftware kanye nohlelo lokusebenzisa isikhathi sangempela
- Imishini yokukhiqiza
- Ukuhlelwa kwephrojekthi
- Ukuphathwa kwendawo yokwakhiwa nokuphathwa
- Ukufakwa nokuhlolwa kwezinsimbi zokusebenza kanye nezinhlelo zokulawula
- Imishini nokuthunyelwa kwezitshalo
- Ukuqeqeshwa kwabasebenzi
- Support kulo lonke ukukhiqizwa
- Ucwaningo olwenzekayo kanye nomqondo
- Ukubalwa Kwezindleko Nenzuzo
- Timescale nokuhlela izinsiza
- Isixazululo se-Turnkey, izixazululo zokuthuthukisa izitshalo nezamanje
- Onjiniyela Knowledgable
- Usebenzisa ubuchwepheshe bamuva
- Ukusebenzisa ulwazi olutholwe emakhulwini ezicelo kuzo zonke izimboni
- Sebenzisa ubuchwepheshe kusuka konjiniyela bethu abanolwazi nabalingani
Langaphambilini I-LSM Vertical Wet Stretring Mill
Olandelayo: Uhlobo Lwe-Disc Jet Mill